Casares del mar - Ipenthouse yolwandle engaphambili + jacuzzi - I-Airbnb
Casares del mar - Ipenthouse yolwandle engaphambili + jacuzzi
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguEwa
KwiCosta del Sol, ephakathi kwe-Estepona kunye neSotogrande, i-penthouse entle kakhulu yabantu aba-2, igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela eli-1, iinyawo emanzini ezinombono omangalisayo wolwandle!
Ixhotyiswe ngethafa lebhastile elimhlophe labucala le-165 m2 enejacuzi eshushu yenzelwe wena, ifenitshala yoyilo, ibarbecue, ibha yokukhanya, ibhedi yangaphandle, iparasol enkulu, njl.
-Igumbi lokulala elinebhokisi yombane yasentwasahlobo (1800x2000).
-Igumbi lokuhlala: Isofa yesikhumba
-i-backlit ye-4K egobileyo ye-TV yesikrini esicaba.
-igumbi lokuhlambela iisinki ezimbini, ibhafu - ishawa
-Ikhitshi exhotyiswe kakuhle kakhulu: i-dishwasher, umatshini wokuhlamba / isomisi, igrill, iNespresso.
-ithafa eluphahleni olunombono weGibraltar
Iitawuli zaselwandle ziyafumaneka
Uqhagamshelo lwe-Wi-Fi yasimahla.
Ifakwe kwindawo yabucala nebiyelweyo enamadama okuqubha ama-2 kunye nokufikelela ngokuthe ngqo elwandle.
Igaraji yasimahla yeemoto ezi-2.
Kubazali abanabantwana abancinci ibhedi eyongezelelweyo kunye nesitulo esiphezulu zifumaneka simahla xa ziceliwe.
I-Pool View ikuvumela ukuba ubukele abantwana bakho abancinci kwi-patio.
Isikhululo seenqwelomoya saseMalaga sihamba iyure, iMarbella iikhilomitha ezingama-25 kwaye kukwakho nepaki yezilwanyana entle yaseSelwo ekufutshane kwaye iPuerto Banus edumileyo kukumgama wemizuzu eli-15 kuphela.
Kummandla ngeenyawo: iindawo zokutyela ezimbini zaselwandle kunye nesitishi senkonzo-ivenkile enokutya kunye neemveliso ezisisiseko kunye nesonka esitsha.
Imizuzu emi-5 ngemoto: IManilva kunye nechweba elincinci laseDuquesa kunye neendawo zokutyela ezininzi, iivenkile njl.
Iikhosi zegalufa ezikufutshane (imizuzu emi-5 kunye nemoto): Doña Giulia, Valle Romano, Estepona Golf.
ICosta del Sol, kuNxweme lweLanga, yenza amaphupha abe yinyaniso ngegama layo - iintsuku ezingama-320 zemozulu entle.
Indawo yentlanganiso yotyelelo kunye nokuqokelela izitshixo zendlu kwi: Iimephu zeGoogle zingena kwifenitshala ye-GAVIRA. es, emva koko ulandele indlela (autovia A-7, km 146.5, cruce de Casares 29690 Casares Costa)
Ukufika emva kwe-21: 00 akunakwenzeka !!!!!!
Ngokuxhomekeke ekufumanekeni kwaye kuphela kwisicelo, kuyenzeka ukuba uqalise irenti yakho phambi kwemini.
Xa ubhukisha kuyanqweneleka ukusazisa malunga nexesha eliqikelelweyo lokufika nokuhamba kwakho.
Iintsuku eziyi-7 e Casares del Mar
Ukufika apho ngokulula: Yiya kwiiMephu zikaGoogle kwaye kukhangelo faka ifanitshala ye-GAVIRA.es emva koko ulandele indlela.
Nous avons eu un coup de foudre surtout pour la terrasse de cet appartement, nous l'avons acheté en 2017 et profitons bien de ce bijou !
Nous envisageons dans le futur de passer notre retraite ici mais pour le moment nous sommes heureux de partager ce petit coin du paradis avec vous
Nous envisageons dans le futur de pass…
U-Evelina uya kubakho ukuphendula imibuzo yakho kwaye akuncede kuyo nayiphi na into ekuxhalabisayo.
Inombolo yomthetho: VFT/MA/12334
Iilwimi: Français, Polski, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Casares del Mar